Ny famerenana ny vokatra momba ny Semalt sy ny fomba ahafahan'izy ireo mampifandray anao amin'ny Top 10 amin'ny fikarohana Google
Ny pejy voalohany amin'ny google dia mifehy ny 92% amin'ny fifamoivoizana. Inona no dikan'izany ho an'ny orinasanao? Midika izany fa ny SEO dia manan-danja kokoa noho ny taloha.
Rehefa manao asa ianao, dia mitady fotoana be dia be ny mikaroka ireo zavatra toa ny habetsaky ny teny fanalahidy, ny backlink ary ny fahefana mpikaroka. Rehefa manandrana mikorontana izany ianao amin'ny famahana ny filan'ny mpanjifanao dia tsy ho tanteraka izany. Ity fanamafisana ity dia antony ilainao ny asa an-tsitrapo avy amin'ny ekipa matihanina iray amin'ny SEO.
Fampidirana an'i Semalt
Semalt dia orinasa izay nametraka ny maha-zava-dehibe ny SEO amin'ny voalohany. Izy ireo dia manome fanohanana ireo orinasa tsy manana manam-pahaizana SEO an-trano.
Izy ireo koa dia miara-miasa amin'ireo tsy mahay SEO amin'ny fitsapana maimaimpoana 14 andro ataon'izy ireo amin'ny serivisy. Manana vokatra iray manokana izy ireo izay tsy te hiditra any amin'ny lafiny teknika: AutoSEO.
Ny fametrahana ny tantaram-pahombiazany
Semalt dia orinasa iray manandratra ny tenany amin'ny firaketana voaporofo. Manana tranga fahombiazana betsaka izy ireo, ary ny sasany dia mahita fitomboana lehibe. Raha ny Surgery TR dia nandray anjara tamin'ny fitomboana 14 heny izy ireo. Azonao jerena eto ambany ny antsipirian'ny fiarahan'izy ireo.
AutoSEO dia nametraka ny orinasan'izy ireo amin'ny 100 voalohany ho an'ny teny fanalahidy 179 nandritra ny efa-bolana. Ny nitondra azy ireo teo amin'ny faha-10 farany dia ny fonosana FullSEO. Ity fonosana ity dia namela azy ireo hamely ny fifamoivoizana 92% sarotra ho an'ny olona mitady ity serivisy ity. Hiresaka momba ny famerenana feno kokoa momba ireo teny ireo izahay taty aoriana, saingy ny tranga tsotra dia izao: miasa i Semalt.
Semalt dia birao feno feno izay manofa antokon'olona marobe natsangana mba hikarakarana izay orinasa mila toerana. Izy ireo dia fikambanana eran-tany, ka azo inoana fa miteny fiteny mahazatra amin'izy ireo ianao.
Afaka mifandray aminy amin'ny Skype, WhatsApp, telegram.me, mailaka, na telefaona ianao. Azonao jerena daholo ny ekipan'izy ireo ao amin'ny pejin'ny mpiasa. Azonao atao mihitsy aza ny maka fotoana fohy mba hankasitrahana ny sokatra ataon'izy ireo.
Hijery ny Terminology
Raha mamaky an'io ianao dia mety mahaliana amin'ny SEO angamba. Mety ho freelancer, tompona orinasa kely ianao na masoivoho marketing hafa.
Na izany na tsy izany, dia tsy ho lasa lavitra ianao raha tsy mahalala ny sasany amin'ireo jargon ao amin'ny orinasa.
SEO, na Search Engine Optimization, dia manangana ny tranokalanao amin'ny fomba toy izany rehefa mahita ny teny manokana izy ireo dia mahita anao. Ireo teny ireo, na ireo teny fanalahidy dia mampitombo ny haben'ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Ohatra, raha te-ho mpandidy plastika fantatra amin'ny rhinoplasty ianao dia mety ho tafiditra ao ny teny fanalahidy hoe "fandidiana rhinoplasty" na "rhinoplasty mora vidy."
Ny algorithm any Google dia manorina amin'ny fomba iray mampifandray ny olona amin'ireo tranonkala mifandraika amin'izany. Jereo ity ohatra etsy ambony izay mampiasa ny teny hoe "rhinoplasty." Izy ireo koa dia manam-pahefana satria avy amina loharanom-pitokisana. Manao izany amin'ny alàlan'ny fandefasana mpanjifa, na bots naorina hijerena tranokala. Ny crawler dia mamaritra ny kalitao mifototra amin'ny antony maro samihafa.
Ireo teny fanamarihana manan-danja dia teny izay heverin'ny algorithm fa mety indrindra hamaritana ny atiny.
Ny backlink no isan'ny rohy misy anao mipoitra amin'ny tranokala hafa, indrindra rehefa raisina ho manam-pahefana ireo tranonkala ireo.
Ny fananganana rohy dia ny fananganana rafitra backlink.
Ny metaly sosialy toy ny fizarana sy bitsoka indray
Misy antony maro hafa izay miditra amin'ny inona SEO, ary tsy hiditra amin'ny rehetra amin'izy ireo izahay, fa ireo dia ho zava-dehibe ho anao hahafantatra ny mahazo izay miditra ao amin'ny endrik'i Semalt. Ny bilaoginay dia manana torolàlana feno momba ny SEO raha te hitrandraka izany lalina kokoa izany ianao.
Ahoana ny fisondrotan'ny vokatra any Semalt dia ny SEO ataonao
Ankehitriny raha manana hevitra tsara kokoa momba ny tiantsika isika dia afaka miditra amin'ny vokatra an'ny Semalt miaraka amin'ny mazava kokoa. Mifantoka amin'ireo faritra hita eo ambanin'ny tabilaon'ny vokatra atolony izahay. Anisan'izany:
Ny tranokala dia mamaritra fa ny AutoSEO dia ho an'ireo izay te hampitombo ny fihodinan'ny tranonkalany, saingy tsy mampiasa vola be. AutoSEO no vokatra fototry ny olona maniry hiditra ao amin'ny SEO. Miaraka amin'ny vahoaka 14000 any amin'ny firenena maherin'ny 192 tafiditra amin'ny fampiroboroboana izany dia nahazo laza malaza iray.
Ny antony lehibe iray mahatonga an'io laza io dia ny fitsarana ny andro 1499. Amin'ny alàlan'ny fahazoana AutoSEO, atolotra ny kaontinao ny manam-pahaizana manokana mba hamakafaka ny tranokalanao. Ireo manam-pahaizana manokana amin'ny SEO dia hahita teny fanalahidy izay ampiasaina matetika amin'ny indostrianareo, fa tsy manam-paharoa mba hanomezana anao mpitsidika izay te hividy.
Semalt dia manome tatitra momba ny laharana amin'ny alàlan'ny rafitra famakafakana azy ireo. Azonao atao ny mahita ny asan'ny orinasa ataonao amin'ny fijerena ny dashboard, izay singa lehibe indrindra rehefa miditra.
Aorian'ny fandalinana ny teny fanalahidy ao amin'ny indostrian'ny tanjona, ny tanjona farany dia ny fananganana rohy mankany amin'ny tranonkalanao mba hahazoana antoka fa manana teny fanalahidy ianao.
Izy ireo koa dia mampiasa rohy misy vatofantsika, izay hisarika ireo mpampiasa amin'ny teboka manokana amin'ny pejy izay mifandraika amin'izy ireo. AutoSEO dia mampifangaro ireo rohy misy azy ireo amin'ny tsy vatofantsika hametrahana ny rohy amin'ny marika anarana ho loharanom-pahefana eo anilany.
Ny vidiny amin'ity rafitra ity dia miovaova eo anelanelan'ny $ 99 isam-bolana ka hatramin'ny 900 $ isan-taona. Azonao atao ny misafidy ny halavan'ny fampielezan-kevitra ataonao ho iray volana, telo volana, enim-bolana, na herintaona. Raha ampitahaina, tranonkala SEO maro hafa no manana ny vidin'ny baseline $ 1000 ho an'ny fampielezan-kevitra. Ny fonosin'izy ireo koa dia manana safidy kely kokoa.
FullSEO dia haingam-pandeha ho an'ny AutoSEO. Ny fahasamihafana lehibe indrindra an'ity sy ny AutoSEO dia hoe manana mpiandraikitra Semalt voatendry amin'ny trangao ianao. Ny mpitantana dia miara-miasa amin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny SEO aloha, ary avy eo dia mandefa ny tatitra tsy tapaka momba ny fivoaran'ny fampielezanao.
FullSEO dia fampiasam-bola amin'ny hoavin'ny orinasanao. Ny ROI, na fiverenana amin'ny fampiasam-bola, dia manodidina ny 700% miorina amin'ny traikefa azon'ny mpanjifa. Isaky ny 100 dolara izay laninao amin'izany dia mahazo 700 miverina ianao.
Ohatra, ny masoivoho trano iray any Meksika dia nahatratra 700% ny fitomboan'ny fifamoivoizana, ka nahatonga azy ireo handeha amin'ny laharam-pahamehana ao amin'ny teny fanalahidy maromaro. Amin'ny alàlan'ny fidirana an-tampony ambony amin'ny teny fanalahidy 724, dia mamela azy ireo hikendry ireo mitady trano any Mexico izy ireo. Raha tsy feno FullSEO dia tsy ho nahita ity haavon'ny fifamoivoizana ity ry zareo.
Raha fanoharana tsara ny ataon'ireo orinasa hafa dia afaka mijery ny WebFX. WebFX dia manolotra endri-javatra mahavariana momba ny SEO sy ny fitaovana famakafakana. Na izany aza, Semalt dia manana karazany maro kokoa amin'ny safidiny vidiny.
Ho an'ny orinasa madinika izay manana teti-bola kely kokoa, dia mora kokoa izany. Eo ambanin'ny safidy FullSEO, faly i Semalt fa mahazo anao ny vidiny ho an'ny fonosana SEO eo an-toerana. Semalt dia mikasa ny hiasa amin'ny teti-bolanao. Ny fandefasana haingana ny tranonkalany dia manambara ny vidin'ny $ 475 farafahakeliny isam -bolana.
Azonao atao ny manandrana am-panandramana 14 andro sy fitsarana AutoSEO hanamora ny maha-izy anao an'io hevitra io. Na izany aza, mety mila mampiasa tranokala hafa ianao, satria holazain'ny Semalt aminao izay fonosana mety hahomby indrindra ho an'ny tranokala tsirairay. Raha tsorina tsotra, ireo mpivarotra hafa dia tsy manolotra fiovan'ny vokatra mitovy amin'ny fananan'i Semalt.
Inona ny atao hoe E-Commerce SEO?
Semalt dia manolotra vokatra manokana ho an'ireo manana E-Commerce, na fivarotana an-tserasera. Ity fonosana ity dia toy ireo efa voalaza ireo ary bebe kokoa amin'ny fanitarana ny vokatra AutoSEO sy FullSEO.
Mikendry ny teny fanalahidy ambany indrindra miorina amin'ny vokatra sy ny marika i Semalt. Ny teny fanalahidy ilainao ny laharana, na ireo teny fanalahidy izay tadiaviny dia mifantoka amin'ireo olona mitady vokatra manokana.
Ohatra, raha te hanana toerana misy ny teny fanalahidy manokana ianao, ny "famantaranandro ho an'ny lehilahy mora vidy," dia ho hitanao fa ny lisitra ambony indrindra ankehitriny dia ahitana lisitra lisitra na video.
Miaraka amin'ny E-Commerce, mety hahita ny fiambenana amin'ireo lisitra folo na horonan-tsary ambony indrindra ianao. Miaraka amin'ny teny fanalahidy napetraka sy fanamafisam-peo SEO dia hitondra ny orinasanao amin'ny ambaratonga manan-kery mitovy amin'ity teny ity ianao.
Inona ny Analytics?
Ny Analytics dia teny iray ampiasain'ny orinasa maro. Google dia manana fampiharana iray manontolo namboarina mba hanarahana ny fomba anaovan'ny doka naloa anao antsoina hoe Google Analytics. Ity vokatra ity dia mihoatra ny lafiny iray amin'ny AutoSEO sy FullSEO, ary ny dashboard dia miaraka amin'ireo vokatra roa ireo.
Ny fitaovana famakafakana an'ny Semalt dia manome fahatokisana ny mpanjifa amin'ny fomba iray mora vakiana. Izy io koa dia manome loharanom-pahalalahana tompon'andraikitra ao amin'ny Semalt, manome porofo ny fampielezan-kevinao miasa. Ity ambany ity ny statistika ho an'ny olona mampiasa ny endri-pandalinana.
Ny famakafakana lalina dia manome anao ny fahafahana manara-maso ny mpifaninana aminao, mamantatra ireo tsena vaovao ary nahazo ny teny fanalahidy ilaina ilazana izany fampahalalana izany. Ary Semalt mamela anao manara-maso ny toerana misy anao amin'ny fotoana rehetra.
Raha mahita tranonkala mandeha any amin'ny HTTP mankany HTTPS ianao dia ohatra amin'izany fanamarinana SSL izay ampiasaina. Ity endrika fiarovana ity dia manenitra ny angon-drakitrao ka manasarotra ny mpikirakira miditra amin'ny fahazoana mombamomba ny mombamomba, toy ny angon-drakitra karatra.
Ilaina izany raha toa ka tranonkala E-Commerce ianao na tranonkala mifototra tolotra mitahiry ny angon-drakitra saro-pady. Ary koa, raha ny Google no mamantatra ny tranokalanao ho toerana azo antoka, dia hanana safidy tsara kokoa ny hahatrarana toerana avo kokoa.
Famintinana ny fomba ahafahan'i Semalt manampy anao eo amin'ny laharana ambony indrindra
Miaraka amin'ny firaketana an-tsoratra voamarina, mpanjifa an-jatony maro, sy ekipa matihanina marobe, ekipa mahatsiaro tena vidin'ny vidim-piainana i Semalt izay vonona hiara-miasa aminao mba hahazoana antoka fa hahavita ny tanjonao
Hitanay ny fomba nahazoan'ny AutoSEO, FullSEO, E-CommerceSEO, Analytics ary SSL ny tombotsoan'ny fitohanan'ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranonkalanao. Miaraka amin'ny ekipa manam-pahaizana manokana sy ny mpitantana azy, dia hahita ny teny manan-danja ianao, ary ireo backlink ilaina hitondra ny tranonkalanao eo an-tampon'ny Google.